Sary sokitra any ivelany ho an'ny orinasa fampirantiana fampirantiana | Piedra
Ny sary sokitra ivelany dia tena goavambe izay azo tehirizina ho toy ny haingon-trano ivelany, toy ny haingon-trano kianja, haingon-seho an-tsary sy ny sisa. Namboarina tamin'ny endrik'akoho izy io, nohosorana vokarin'ny fitaratra sy loko volamena. Ary hafa io amin'ny volom-bolomanitra iraisana, izay sarivongana io dia miaraka amin'ny volamena volamena miloko, ahafahanao mahita ny fandinihana ny aloka eto. Fa ny loko volamena mahazatra tsy afaka mahita aloka. Raha misy sary sokitra zaridaina metaly tianao, dia aza misalasala mandefa mailaka aminay amin'ny sales1@brandsculptures.com.
Description sary sokitra anatiny
Size Azo amboarina
Famantarana Eny, Logo dia mety ho sokitra tamin'ny laser, namboarina / namboarina tamin'ny bobongolo sns.
OEM / ODM Eny, tongasoa am-pitiavana.Please alefa aminay ny famolavolana na sary ataonao na fanaovana sketsa
Vidin'ny santionany Hifampiraharahana sy hanangonana entana
Fotoam-pitarika modely About15days
Ora nanomezana Manodidina ny 25-30 andro eo dia miankina amin'ny habetsaky ny toe-javatra sy ny maodely
Fampiasana Haingo an-trano, fanomezana, fanangonana zavakanto, haingon-trano zaridaina, haingon-trano, ravaky ny tokontany, haingon-trano, ravaka birao, haingon-trano, sns.
Fonosana Fonosana poavra nasiana tombo-kase
Statement Ny sary dia ny hampisehoana fotsiny ny fahaizantsika manamboatra vokatra. Azonao atao ny matoky ny hatsarantsika
Fisafidianana fahaiza-manao Amboarina, sokitra, sanding, polishing na sary hosodoko na Chromed eo amboniny
2. Mamolavola ny hevitrao na ny sary ataon'ireo mpanaingo antsika. Azonao atao ny manome anay ny hevitrao, na avelanao hamolavola anao.
Ny fizotry ny sary sokitra vy maoderina:
1. Azontsika atao ny manao sarisary vita amin'ny tànana / foam-by 3D na bobongolo plastika dia miankina amin'ny famaritana anao.
2. Ataovy ny firafitry ny metaly arakaraka ny sary na santionanao kely.
3. Sarony anaty vata anatiny ny takelaka vy
4. Weld sy poloney ny ambonin`ny vokany fitaratra
Previous: Sarivongana maoderina mahavariana
Manaraka: Zavamaniry any Abstract Sculptures amidy
Abstract Style sary sokitra vita amin'ny metaly ivelany toy ny ...
Haben'ny fiainana ivelan'ny stainless vy vy sculptu ...
Zavamaniry momba ny Contemporary ho an'ny haingo
Sary vongana vy lehibe eny an-tokotany Metal Garden Flo ...